KU: Qurbajoogta Deegaanka Kasoo Jeeda OG: Shirkada KAAH - Cakaara News
KU: Qurbajoogta Deegaanka Kasoo Jeeda OG: Shirkada KAAH
jigjiga ( Cakaaranews ) khamiis, 3da march 2016. Sida lawada ogsoon yahay waxaa lasoo saaray degmo kasta gudigii qaban-qaabada xafladaha, health centerka iyo dugsiga. Waxaa kale oo lasameeyay accountyadii xafladaha, dugsiga iyo health centerka degmooyinka, gobolada iyo maamul-magaalooyinka. Sidaadarteed, waxaa Xawaalada KAAH lalasocodsiinayaa inaysan qabanin lacagaha ka imanaya qurbajoogta deegaanka ee jabuuti, Kenya, soomaaliya, Somaliland, puntland ama guud ahaanba qurbajoogta qaarada afrika kunool. Waxaa accountyada loo furay health centerada iyo dugsiga lacag kusoo diri kara oo kali ah qurbajoogta kunool wadamada reer galbeedka oo ah kuwa lakaka saarayo ee ay fartu kugodan tahay.
FG: waxaan shacabka deegaanka soomaalida u balan qaadaynaa inaan idin soo hor-dhigi doono qurbajoogta dadkooda kanaxaysa ee jecel inay waxbarasho iyo caafimaadba helaan. Sidoo kale, waxaan idin soo hor-dhigi doonaa degmooyinka qurbajoogtoodu aysan wax dan ah kalahayn ee iyaguna mashaqaystayaasha ah. Waxaana degmooyinka ay qurbajoogtoodu mashaqaystayaasha yihiin looga qarafayn doonaa qurbajoogta kale oo yaa alle wax kudhawray oo degmo hebel u qarafeeya ayuu noqon doonaa hal-kudhaga loogu qarafayn doono.
Dhanka kale, waxaa hubaal ah in degmooyinka qaar ay sugi la’yihiin inta accountga lafurayo maadaama oo ay rabaan inay noqdaan kuwa ugu horeeya meesha degmooyinka qaar ay u egyihiin ama lafilayo in loo qarafayn doono marka laga eego calaamadaha hada kamuuqda ee danayn la’aanta ah. Waxayna qurbajoogta noocan ah kusifoobi doonaan waxa luuqada axmaariga lagu dhaho ‘Afajawle’ oo macnaheedu yahay ‘fadhi-kudirir’.